व्यवसायी अर्यालद्वारा सिधाकुराका पत्रकारलाई कार उपहार - Everest Dainik - News from Nepal
व्यवसायी अर्यालद्वारा सिधाकुराका पत्रकारलाई कार उपहार
काठमाडौंः टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधाकुरा जनतासँग’ का उत्पादक दीपक बोहराले एक जना व्यवसायीबाट कार उपहार पाएका छन् । उनले जापानमा बस्ने रेमिटेन्स कम्पनी इजि लिंक सञ्चालक नेपाली नागरिक डिपी अर्यालबाट कार उपहार पाएका हुन् ।
कार्यक्रम उत्पादक बोहराले अर्याललाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो फेसबुकमा फोटो राख्दै लेखेका छन्, ‘मलाई पनि भित्री आत्मादेखि माया र स्नेह गर्ने दाइहरु छन् । डिपी अर्याल दाइ जसले आफ्नो जीवनको पहिलो यती राम्रो गाडी दिनुभयो । यो गाडी म जीवनभर माया गरेर चलाउने छु । थ्याङ्क यू सो मच दाई ।’
याे पनि पढ्नुस अदालतमा आजै थुनछेक बहस हुनसक्ने, रवि धरौटीमा छुट्ने सम्भावना !
अर्याल को हुन्?
उनी रेमिटेन्स कम्पनी इजि लिंकका सञ्चालक हुन् । जसले केही समय पहिला ‘सिधाकुरा जनतासँग’ का सञ्चालक रवि लामिछाने र उत्पादक बोहरालाई जापान लगेर सयौँ नेपालीहरु भेला पारेर इजिलिंकको प्रचार गरेका थिए ।
उक्त रेमिटेन्स मार्फत जापानमा बस्ने नेपालीहरुले रकम पठाएमा अतिरिक्त एक सय रुपैयाँ अतिरिक्त लिने गरेका छन् ।
अर्यालले बोहरालाई आफन्त वा नातेदार भएर उपहार दिए वा कुनै व्यवसायीक सम्बन्धका कारण दिए भन्ने कुरा भने खुलेको छैन ।
पत्रकार आचार संहितामा पत्रकारले पेशागत मर्यादाविपरीत उपहार तथा पुरस्कार ग्रहण गर्न नहुने भनिएको छ । संहिताको पत्रकारले गर्न नहुने कार्य अन्तर्गत बुँदा नम्बर १३ मा भनिएको छ “पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारका पुरस्कार, उपहार वा सम्मान वा विशेष सुविधा लिनुहुँदैन ।”
याे पनि पढ्नुस रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने कि नगर्नेमा बहस
ट्याग्स: कार, दिपक बाेहरा, रवि लामिछाने